मेरो बैंश त्यत्तिकै खेर गयो जस्तो लाग्छः एकनारायण भण्डारी - Reel Mandu
मेरो बैंश त्यत्तिकै खेर गयो जस्तो लाग्छः एकनारायण भण्डारी
काठमाडौं । सांगीतिक क्षेत्रमा एकनारायण भण्डारी निकै चर्चित र रुचाइएको नाम हो । सर्जक भण्डारीका जति पनि गीत बजारमा आए ती सबै गीतले दर्शक, श्रोताको मन जिते ।
स्याङजाको गल्याङ नगरपालिका ९ सम्पासका भण्डारी सानैदेखि गीत, साहित्य लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो । भण्डारी भन्नुहुन्छ‘ म सानै देखि लेख्ने गर्थेँ, मलाइ लेख्न निकै मन पथ्र्यो । गीत संगीतबिनाको जिवन कल्पना नै गरेको छैन ।’
२०५९ सालमा काठमाडौं छिर्नुभएका भण्डारीको केही वर्ष अवसरका खोजी गर्दागर्दा बिते । लगातारको मेहनत र प्रतिभाकै कारण आज उहाँ स्थापित सर्जकका रुपमा चिनिनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘घरमा पारिवारिक वातावरण गीत संगीत नभएकाले म एक्लो हुँ ।
कलाकारीता र राजनिती लाग्न परिवारबाट प्रोत्साहन छैन । छोराछोरी चर्चित भएको हेर्ने सबै चाहुनुहुन्छ तर प्रोत्साहन गर्ने कम हुनुहुन्छ मेरो पनि हुनुहुन्नथ्यो तर अहिले घरमा बा–आमा खुशी नै हुनुहुन्छ ।’ भण्डारीले थप्नुभयो, ‘गाउँमा फलानोको छोरो सचिव भयो, अधिकृत बन्यो भनेको सुन्दा मेरो बा–आमालाई पनि रहर लाग्दो हो । तर मुखले भन्नुभएको छैन, म अनुहार पढ्न सक्छु ।’
तर गाउँघरमा फलानो (एकनारायण) तेरो छोरा भनेर बा–आमालाई भन्दा निकै खुशी बन्ने पनि उहाँको भनाइ छ । भण्डारीका एक भाइ र दुई बहिनी छन् । श्रीमती र छोरीको साथमा काठमाडौंमा बस्दै आउनुभएका भण्डारीले गीत–संगीतमै कर्म गरेर काठमाडौंमा घर बनाउन लागेको बताउनुभयो ।
‘मैले काठमाडौंमा घर बनाउन लागेको कुरा सार्वजनिक गरेको छैन । पहिलोपटक तपाईंको मिडियामा गर्दैछु, अब घर अन्तिम चरणमा छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
लगातार गीत गरिरहने तर मिडियामा आउन एकदमै कम चाहने भण्डारी प्रचारमुखी बन्न हुन्न भन्नेमा विश्वास राख्नुहुन्छ । भण्डारीका बजारमा आएका लोकदोहोरी, आधुनिक र चलचित्रका सबैजसो गीत चर्चामा छन् । आफुले गरेका हरेक गीतमा एउटा न एउटा कमजोरी खोज्ने र पाउने पनि भण्डारी बताउनुहुन्छ ।
‘मैले जतिपनि गीत गर्छु सबै दर्शक श्रोताले मनपराई दिनुभएको छ । हरेक गीत बजारमा आउँदा मनमा डर लागिरहन्छ तर गीतले सोचेभन्दा माया पाउँछन् निकै खुशी लाग्छ’ भण्डारीले भन्नुभयो । भण्डारी भन्नुहुन्छ ‘भ्युज मात्रै ठुलो होइन र लाग्दैन । प्रचारमुुखी हुनुहुन्न भन्ने लाग्छ । काम गरौँ काम गरेर देखाउँ आशा नगरौं ।’ भण्डारीलाई ‘यति गरे भन्ने हुँदैन धेरै गर्न बाँकी छ’ भन्ने लाग्छ ।
लोक दोहोरीदेखि नेपाली चलचित्र र आधुनिक गीतमा कलम चलाएर सबैको मनमा बस्न सफल सर्जक भण्डारी नाम भन्दापनि काममा विश्वास गर्ने सर्जक हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘काम राम्रो गरियो भने नाम दिने दर्शक श्रोताले हो ।’
प्रस्तुत छ, भण्डारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
१. हिजो–आज के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
बसिराछुु हाहाहा… ।
कोभिडका कारण केही गीतहरु धकेलिएका थिए तीनै गीतहरुको तयारी र नयाँ गीतहरु पनि आउने क्रममा छन् । आधुनिक गीत महसुस, लोक दोहोरी ‘माकुरी’ चलचित्र ‘ए मेरो हजुर–४’, ‘यो कुरा गोप्यनै राखौँला’को सिक्वेलको तयारी । यीनै काममा व्यस्त छु ।
२. हजुरको पहिलो गीत कुन हो र कहिले सार्वजनिक भयो ?
०५५ सालतिर देउरालीमा हावा चल्यो बुद्धिसागर बस्यालको एल्बमा समेटिएको गीत थियो ।
३. लोकदोहोरी, आधुनिक र चलचित्र सबै विधामा कलम चलाउनुहुुन्छ ? यी तीन विधामा शब्द लेख्न उस्तै होकी केहि फरक छ ?
केही त फरक छ । गीतको विषयबस्तु, भाव पत्ता लगाउनु भनेको खानीबाट सुन पत्ता लगाउनु जस्तै हो । त्यो पत्ता लगाइसकेपछि त्यसको बुुलाकी बनाइयो भने लोकगीत भयो, त्यसको सिक्री बनाइयो भने आधुुनिक गीत भयो । त्यसैले भाव नै ठुलो कुरा हो लोक आधुनिक भन्ने कुरा त पछि प्राविधिक कुुरा हुन् ।
विषयबस्तु लोक र आधुनिक भन्ने हुन्न । भाव एउटै हो भावलाई कुनमा बनाउने भन्ने फरक छ । त्यसमा मेहनत गर्नुपर्छ । लगातार लोक गरिरहँदा आधुुनिक गर्न कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन जान्छ, आधुनिक गरिरहँदा लोकमा गाह्रो रोजस्तै । तर यी सबै विधामा रमाउँछु म ।
४.गीत कुन समयमा बढी सिर्जना गर्नुहुन्छ ?
खास गीत लेख्छु भनेरै समय निकालेर बस्दिन मँ । म लेख्नेभन्दा पनि सोच्ने हो । सोचेर पुरा गर्छु अनि शब्दमा उतार्छु । कुनै गीत छिट्टो बन्छन्, कुनै बन्न बर्षौँ पनि लाग्छ ।
५.संख्यात्मक हिसावले अहिलेसम्म कतिवटा गीतमा शब्द संगीत गर्नुभयो ?
ठ्याक्कै यकिन छैन तर एक हजार भन्दा कम र छ सय भन्दा बढी यही बिचमा छन् ।
६. गायक/गायिकाभन्दा गीतकार, संगीतकार कम चिनिने हुन्छन् तर तपाईं भने उत्तिकै चर्चामा हुनुहुन्छ नि ?
यसमा मुख्य दर्शक श्रोताको माया हो । अझैं भन्नुपर्दा म संगै काम गरेका कलाकारहरु राजु परियार, कुलेन्द्र बि.क, प्रमोद खरेल, सुरेश अधिकारी र हेमन्त शर्मालगायत गायकहरुले जहाँपनि स्टेज लगायतका कार्यक्रमहरुमा गीत गाउँदा सर्जक (मेरो)को नाम लिएर गाइदिनुहुन्छ । फेरि सबै गीत मेरै स्वामित्वमा भएर पनि हो । लगानी कम्पनि सबै मेरै भएरपनि हुन सक्छ ।
६.कलाकारको छनौट कसरी गर्नुहुन्छ ?
गीत अनुसार सुहाउँदो कलाकार हेर्छु, सम्बन्धको हिसाव र बजारमा रुचाएको कलाकार हेरेर छनौट गर्छु ।
७. तपाइलाई मन पर्ने गायक, गायिका को हुनुहुन्छ ?
सबै मन पर्नुहुन्छ । गीत र प्रकृति अनुसार मन पर्छ । सबैका विशेषता आ–आफ्नै हुन्छन् । राम्रो नराम्रो भन्ने हुँदैन यो मान्ने कुुरा हो । सही र गतल भने हुने कुरा हो ।
८. प्रेम सम्बन्धको अनुभव कस्तो रह्यो ?
०६३ सालमा बिहे गरे । मलाई कसैले प्रेम प्रस्ताव राख्नुभएन मनमनै प्रेम गरेको भए जानिन । हाहाहा…! मलाई मेरो बैंश त्यत्तिकै खेर गयो जस्तोपनि लाग्छ कहिलेकाहीँ । फोनमा कुरा, भेटेर चिया पिउने गफगाफल गरेको अनुभव छैन म संग ।
९. गीतसंगीतको क्षेत्रमा नलागेको भए अहिले एकनारायण भण्डारीलाई कहाँ पाउथ्यौं ?
गीत–संगीभन्दा बाहिरको जिवन कल्पना गरेको छैन । म सानै देखि लेख्ने गर्थे । अहिले गीतकार नभएको भए यहि क्षेत्रमा हुन्थे । साहित्य लेख्थे होला ।
१०. यो पेशाबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
म काममा रमाउने मान्छे हुँ । मलाई मेरो कामको माया लाग्छ ।
११. बजारमा आएका गीत मध्ये सबैभन्दा मन परेको कुन हो ?
सबै गीत मलाइ उत्तिकै मन पर्छन् । यहि भन्ने छैनन् । विशेषगरेर कहिल्यै नहराउने सधैं बोली व्यवहारमा आइरहने गीतहरु – ‘आमाले घाँस काट्दै गर्दा, म त के राम्रो छुँ र , आओ यादहरु, जिन्दगी नै भन्दिन, माया गर्ने मुुटुले हो निधारले होइन ।
१२. गीत गाएर पाएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपहार के छ ?
नाम, परिचय, म संग काम गर्दा धेरै गायक-गायिका, मोडल साथीहरु खुशी हुनुहुन्छ । त्यो यो देख्दा मलाइपनि अत्यधिक खुशी लाग्छ ।
मैले खुशी, सन्तुष्ट बनाउन सकेँ जस्तो लाग्छ । धेरै साथीहरुले मेरो गीत गाएर चर्चित भए भनेको सुन्छु यो पनि मैले कमाएको अमुल्य सम्पत्ति हो । ‘मेरो कलमले, मेरो सीर्जनाले कसैलाइ स्थापित बनायो’ यो कुरा नै मैले पाएको महत्वपुर्ण उपहार हो ।
१३. नयाँ कलाकारका गीत कत्तिको सुन्नुहुन्छ, कस्ता लाग्छन् ?
म गीत कम सुन्छु तर जति सुनेको छु राम्रा छन् । त्यति धेरै बिकृती छैन जस्तो लाग्छ तर केहि कलाकार भाइरलको पछि लागेको देख्छु त्यो राम्रो होइन । भाइरल भन्दापनि जिवन्त र राम्रो सिर्जनामा केन्द्रित हुनपर्छ । पैडी खेल्न सिक्नेनै पानीमा हो त्यसैले बिस्तारौ सिक्ने हो तर राम्रोसंग सिक्नपर्छ ।
१४. भाउजु (भण्डारीकी जीवनसंगिनी)को लागि कुनै गीत लेख्नुभएको छ ?
हाहाहा… ! छैन मैले गीत लेखेको पनि सुनाएको छैन र सोधेकोपनि छैन । मलाई यस्तो गर्न खासै आउँदैन ।
१५. अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
म आज जे छु यो सबै दर्शक श्रोताको माया हो । दर्शक श्रोताले माया गरेरै म आज एकनारायण भण्डारी भनेर चिनिएको छु । दर्शक श्रोताप्रति सधै आभारी छु, तपाइहरुलाई सधै म मिठा र राम्रँ गीत पस्कने प्रयासरत छु र रहिरहने छु । धन्यवाद !